सावधान ! यस्तो समस्या भएका महिलाले भुलेर पनि खानु हुँदैन मेवा – live 60media
सावधान ! यस्तो समस्या भएका महिलाले भुलेर पनि खानु हुँदैन मेवा
किड्नीमा पत्थरी स् हुनतस् मेवाको सेवनले क्यान्सर, हाइपरटेन्शन, ब्लड भेसेल डिसअर्डरबाट सुरक्षा मिल्छ तर एक अध्ययनमा यो कुरा पनि पत्ता लागेको छ कि मेवाको अत्यधिक सेवनले किड्नीमा पत्थरीको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
मेवामा अधिक मात्रामा पाईने भिटामिन सी यसको लागि जिम्मेवार हुन्छ । तर मेवा गर्भवती महिलाले खानु हुँदैन । मेवाले गर्भाशयलाई संकुचित पार्ने भएकाले यसको सेवनले गर्भपतन हुने खतरा बढ्दछ । मेवाको सेवन केवल गर्भावस्थामा मात्र नभई सन्तान भएपछि पनि हानिकारक हुन्छ ।
← यी नाम भएका युवतीहरुले कहिल्यै प्रेममा धोका दिंदैनन्
३३० फीट उचाईबाट बन्जी जम्प गर्दा डोरी चु’डिएपछि… ( भिडियोसहित ) →